Fumanisa indlela yokuhombisa ikhaya lakho kunye nesimbo se-vintage boho | IBezzia
Susana Garcia | 26/04/2021 20:00 | Ukuhonjiswa, Iindlela zokuhombisa
La Umxube wezitayile xa uhlobisa Yenye yezona zinto zibalaseleyo esinokuzenza, kuba isinika inkululeko engakumbi xa kuziwa ekufumaneni iziqwenga kunye nenkuthazo. Kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha izitayile zimanyene kwaye kunzima ukuqonda enye ngaphandle kwenye. Umzekelo, isitayile seediliya sikhona kwabanye njengamashishini okanye i-boho chic. Kule meko siza kubona indlela yokuhombisa kwisitayile se-vintage boho.
El Isitayile se-boho se-vintage sisebenzisa umtsalane kunye nokulula kwesitayile se-bohemian Kunye nokuchukumisa okukhethekileyo kweziqwenga zeediliya ezinembali kunye nomlinganiswa. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngomnye wemixube esiyithanda kakhulu kuba sinokwenza iimeko ezinobuntu obuninzi kunye nesitayile esingenakuthelekiswa nanto.
1 Imibala kwilizwe le-boho
2 Izityalo zibalulekile
3 Ukuchukumisa okungaqhelekanga
4 Iziqwenga zeediliya
5 Sukungxamela ukuhombisa
Imibala kwilizwe le-boho
Mhlawumbi eyona nto inzima ukudibanisa kunye nokudibanisa kwisitayile sokuhombisa seboho yimibala, kuba akukho mxube kuphela. Kwisitayile saseNordic kusetyenziswa iithoni ezininzi ezisisiseko kwaye kule ndlela kulula, kodwa kwihlabathi le-boho ukujongwa okungaqhelekanga kufunwa ngeethoni zihlala zifudumele. Banga xuba iithoni zomhlaba, abanye bomvu, bumdaka, orenji kwaye luhlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza. Konke kuxhomekeke kwinani lemibala esifuna ukuyongeza. Njengoko kuninzi inkululeko, singasebenzisa iithoni ezahlukeneyo kwaye sonwabe ngayo. Ewe kunjalo, kufuneka sibaleke ukugqitha, kuba ukuba sinemibala emininzi kakhulu singadinwa ekugqibeleni. Sebenzisa ithoni esisiseko efana ne-beige kunye neetoni ezimhlophe ezaphukileyo kwaye kubo kongeza iimpahla ezishicilelweyo kunye nemibala emihle.
Izityalo zilongezo olukhulu kuwo nawuphi na umhombiso kunye nekhaya, kodwa kwisitayile se-boho seediliya basoloko bekhona. Ungasebenzisa iindidi ngeembiza, ezinye zinesimbo seediliya, ezinjenge-terra cotta, ukudibanisa izitayile. Izityalo ezinkulu okanye icacti zilungile. Unokuxhoma ezinye izityalo ngeebhotile zokukhonkxa, eziphinde zayimfashini kwaye zilungele ukudibanisa ezi ndlela. Unokwenza ikona ezele zizityalo.
Kwi-boho chic sinokubamba nje kodwa ikwayi- Ukubonakaliswa kwendlela yokuphila ye-bohemian, apho ukuhamba neenkcubeko ezingaqhelekanga zinendawo yazo. Kungenxa yoko le nto kumaxesha amaninzi sinokubona iziqwenga ezivela kwezinye iinkcubeko ngale ndlela. Ukuba ukhetha into yeediliya uya kuba nayo ngokugqibeleleyo. Ungoyiki ukudibanisa kwaye ukhethe iziqwenga ozithandayo, nokuba azisiyondawo, kuba lo ngumoya wale ndlela.
Zininzi izimvo ezahlukeneyo kwisitayile seediliya, kodwa ngaphezulu kwako konke, iziqwenga zenyani kunye nezakudala ziyafunwa, ezingakhange ziphinde zifakwe kwakhona okanye ezingezizo nje ikopi yento endala. Ngale nto unokukhangela kwimikhondo, kuba kuzo unokufumana iziqwenga ezinomdla ngokwenene, kunye nembali yazo kunye nobuntu. Ukukhetha iziqwenga ezikhethekileyo yiklasikhi kwisitayile se-boho, kuba awufuni ukuba nendlu efanayo neyomntu wonke, ngokusekwe kwimikhwa, kodwa into eyahlukileyo eyahlukileyo.
Kulo Isitayile se-boho seediliya iziqwenga kufuneka zikhetheke, ke kusenokwenzeka ukuba asizukufumana yonke into ngaxeshanye. Kubalulekile ukuthatha ixesha ukukhetha iziqwenga kunye neenkcukacha, ujonge izinto esizithandayo ukwenza imeko efanelekileyo ekhaya. Nje ukuba unefanitshala esisiseko, ungathatha ixesha lakho ukukhangela iinkcukacha ezincinci, ukusuka kwiivazi ukuya kumalaphu ukuya kwizipili. Akukho kungxama xa kufikwa ekufumaneni iziqwenga zeediliya kuba into esiyifunayo ayisoloko ibonakala ekuqaleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ungayihombisa njani ngesimbo se-boho seediliya